Oghere Sentinel 2 | ThatsLuck.com
Oghere Sentinel 2 dị ka ị ghọtaraworị, ọ bụ mgbakwunye nke abụọ maka kediegwu ►Pụrụ Ime bbylọ, nke mbụ online roulette software nke na-enye gị ohere nyochaa na ozugbo gburugburu Tebụl 20 roulette.
Iji mee ka ọtụtụ ihe omume a bụrụ ihe dị mkpa iji zụta akwụkwọ ntuziakaPụrụ Ime bbylọ, Otú ọ dị, ọ bụrụ na i nweela ederede ederede na ederede ntụgharị nke ụfọdụ tebụl roulette, ị nwere ike iji mmemme ahụ n'enweghị nsogbu karịa, ọ dịkwa n'ihi na Oghere Sentinel 2 enwere ụfọdụ ọrụ na-atọ ụtọ anaghị emetụta naanị data anakọtara site na Lobby Miner.
Otu Lobby Sentinel si arụ ọrụ 2
Oghere Sentinel na omume ọ nko nko faịlụ ederede e dere na ozugbo site ►Pụrụ Ime bbylọ ma kọwaa usoro ọnụ ọgụgụ metụtara ya rue ugboro ole nọmba ndị ahụ, eziokwu dị mkpa nke nwekwara ike inyere onye ọkpụkpọ aka ịchọpụta ma ọnụnọ nke a enweghị mmasị nke roulette.
Edeela m ọtụtụ ihe na isiokwu nke enweghị isi, gụọ bot gabatar post ► Roulette Bias Sniper ka mma ịghọta niile echiche nke ọ dabeere Oghere Sentinel 2 na otu esi eme otutu ihe.
Dịka ị pụrụ ịhụ na onyogho a, ahọpụtara m naanị ụfọdụ okpokoro ndị dịnụ, ọkachasị na-ezere tebụl dị ka Lightning Roulette, Quantum Roulette, yana roulettes niile na-akpaghị aka, n'ihi na ọpụpụ nke tebụl ndị a anaghị abụkarị nsogbu.
Ihe mbụ ị ga - eme bụ pịa bọtịnụ ahụ Bugharịa tebụl Roulette, n'ụzọ dị otú a, a ga-eburu ha n'ime Oghere Sentinel 2 faịlụ niile nke tebụl ahọrọ dị iche iche ma n'eziokwu ị ga-ahụ na ọnụọgụ nke spins edere ga-apụta (Oghere Spins), mgbe kọlụm mbụ (Roulette #) ga - eme ka amata tebụl na ọnụ ọgụgụ na - aga n'ihu 01, 02, 03, wdg.
Ozugbo emere ọrụ a dị mfe, anyị nwere ike nyochaa tebụl dị iche iche ejikọtara na ụzọ abụọ dị iche iche: ma ha niile n'usoro, ma ọ bụ otu aka n'otu oge.
N'oge a ọ dị mkpa ịkwụsịtụ iji kọwaa ụdị ọnụọgụ a na-enyocha Oghere Sentinel 2.
Ọ bụrụ na ọ bụghị oge mbụ ị na-eleta ThatsLuck.com, eleghị anya ị gụọ ihe gbasara Soft itgba na post raara nye Roulette bot ► Roulette Bias Sniper.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgụ ihe n'okwu a, ana m atụ aro ka ị gụọ (ma ọ bụ gụgharịa) post ahụ, n'oge ahụ, na nkenke, anyị nwere ike ịsị na Soft itgba abụghị ihe ọzọ karịa a uru nke na-agwa anyị ma ọnụọgụ nke tebụl roulette na-apụta ugboro ugboro karịa nkịtị.
Tebụl dị na mmemme ahụ dabere na ya 100 na-agbagharị nke ọ bụla, site na 100 ruo 10.000, a na-amata nke ọ bụla site na mpaghara ọcha, ebe ozugbo n'aka nri anyị na-ahụ uru bara uru nke Soft itgba.
Dịka ọmụmaatụ maka ọnụ ọgụgụ 100 na-agba nro uru bara uru bụ 28, maka 200 spins ọ bụ 39 were gabazie.
Na omume, ka ọnụọgụgụ na-apụta, mmemme ahụ na-agbakwunye uru dị mma nke ọnụọgụ mmadụ ọ bụla (ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere uru bara uru nke nọmba, ị ga-ahụ ihe niile edere ► qui), nchikota a na-anọchi anya Positive Value nke tebụl niile, nke a na-akọ na PV kọlụm.
Mgbe PV nke okpokoro ahụ dum bara uru nke Soft Soft for the recording spin tranche, mgbe ahụ ọ pụtara na anyị nọ na ọdịiche "adịkarịghị", nke na-eme na ọnụ ọgụgụ naanị 5% nke oge. Ya mere, anyị nwere ike ịsị na ọ na-esiri anyị ike na tebụl gafere oke nro.
N'oge a ihe 2 nwere ike ime:
► Trekpụrụ ahụ jiri nwayọọ nwayọọ laghachi na nhazi (ya mere uru PV dara n'okpuru Soft LImit);
► usoro a na-arị elu.
Ọ bụrụ na, dịka ọ dị na nke 2, omume ahụ na-aga n'ihu na-ebili, anyị ka na-amalite aiming.
Usoro ọrụ ya mere dị mfe: mgbe ịmalite ►Pụrụ Ime bbylọ ka anyị bido Oghere Sentinel 2 (ebe anyị edoziworị njikọ na tebụl dị iche iche anyị chọrọ nyochaa), n'oge a, ebe ọ nwere ike iwe ogologo oge tupu e kee ọnọdụ egwuregwu, anyị na-amaliteNhọrọ, na-egosi nke mbụ n'ọhịa n'okpuru nkeji ole tebụl ga-enyocha (M na-etinyekarị 1 nkeji).
Mgbe ahụ, m na-enyere nhọrọ aka Aleda Alert (ụda njikere) ma ọ bụ Alert Email (email njikere) ma ọ bụrụ na n'ụbọchị a table gafere nro dị nro (nke, dị ka e kwuru na mbụ, na-eme naanị na 5% nke ikpe), M ga-anụ mkpu na-ege ntị ma ọ bụ nata email.
N'oge a enwere m ike belata mmemme ahụ na ogwe ọrụ ma gaa n'ihu na-eji PC eme ihe, ọ bụrụ na ihe emee, m ga-achọpụta.
Ozugbo mkpu malitere (okpokoro nwere ọnụ ọgụgụ dị elu nke sọọsọ sọọsọ nọmba), na PV kọlụm uru kwekọrọ na tebụl nwere ike ile mmadụ anya n'ihu na-abụ nke Uhie ma ugbu a, a na-ebute akụkụ ọrụ ahụ, ya bụ ịsị ịmalite ịkụ nzọ!
N'oge a, pịa bọtịnụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke Kọlụm FIght! na tebụl egosiri na ọmarịcha ga-emepe ozugbo ...
L'Autopilot ọ bụ ihu ọma a clicker, nke na-egosi nanị ọnụọgụ nke mmasị anyị, nke ahụ bụ ndị niile nwere otu ezigbo uru Ihe kariri 8.
Achọrọ m imechi ubi naanị nọmba ndị a maka ụfọdụ ezi ihe kpatara ya: nke mbụ na ọ bụ eziokwu na uru nke Soft Soft na-akwado ya site na ọnụ ọgụgụ niile dị mma, yabụ ndị nwere uru dị ala karịa 8, mana na ndabere nke ule ugbu a, ekwenyela m na ịkụ nzọ niile dị mma. pụtara idozi na oke nke 15-18 nkeji ịkụ nzọ, nke na omume ọ fọrọ nke nta ka ya na ịkụ nzọ dịka ọmụmaatụ na Red ma ọ bụ Black.
Site n'ime nke a, ụtụ isi dị ọtụtụ, ọtụtụ ihe na onye ọkpụkpọ ahụ, n'ezie ọnụ ọgụgụ nwere PV karịrị 8 dịkarịa ala karịa 6, ihe kpatara na-enye onye ọkpụkpọ ohere igosipụta onwe ya obere ma karịa ihe niile iji mechie mwakpo ahụ. ọbụlagodi mgbe uru PV okpokoro dara n'okpuru nke Soft Soft.
N'aka nke ọzọ, a maara echiche ahụ nke ọma, site na ịkụ nzọ dị mma dịka Red, ụtụ isi na-eme ka ọ ghara ikwe omume iji merie ihe dị ka 40.000 spins, ebe ị na-ekwu maka ọnụọgụ abụọ, ọbụlagodi mgbe 200.000 na-atụgharị enwere ike enwere ụfọdụ (max 1 ma ọ bụ 2) ka dị mma.
Nke a bụ tiori na ịnwere ike ịnwale onwe gị site na nbudata ma jiri sọftụwia ► Roulette Bias Sniper, nke gunyere generator na adighi nma nke diri nani udiri.
E wezụga nke ahụ, burukwa n’uche na omume mmeri nke obere otu ọnụọgụ nwere ike ịdịru ụbọchị anọ!
Ya mere, echegbula ma ọ bụrụ na ruo ọtụtụ awa na awa enweghị akara nke ndụ site na tebụl, ọ gaghị ewe ọtụtụ ihe maka omume ịmalite ịmalite ịkpụzi ma na-adịgide site na ole na ole ruo puku ole na ole ntụgharị.
O doro anya ma ọ bụrụ na omume na-adịgide karịa nkịtị, ma ọ bụ ọ bụrụ na uru nke Soft adaba ọ ruru na nkeIke Limgba (echiche ndị a abanyelarịrị ebe niile ► qui), mgbe ahụ ọ pụtara na anyị nọ n’ihu a 100% ele mmadụ anya n'ihu roulette!
N'okwu a dị obere ma nwee obi ụtọ, ana m akwado ịhapụ Paseeji Sentinel 2 wee rụọ ọrụ bot immediately ozugbo Roulette Bias Sniper, na-arụ ọrụ karịa otu roulette na ntinye ndị ọzọ iji melite mwakpo bara uru.
Enwere ike ịhazi AutoPilot n'otu ụzọ ahụ maka mmemme ndị ọzọ ThatsLuck, dị ka ► Roulette Turbo Clicker, ihu ọma dị nne Mmetụta na nhọrọ Oghere Spacebar Turbo ma debe òké ahụ na nọmba dị iche iche nke egwuregwu ahụ iji dekọọ nhazi X / Y nke kwekọrọ na ọnọdụ nke nọmba na ihuenyo.
Otu na-aga n'ihi na Ntanetị Trigger, ka hazi nzọ Anti Disconnenction anyị ga-aga n'ihu aka.
Il Ntanetị Trigger na omume ọ bụ isi nke ihuenyo na gbanwee agba naanị mgbe a na-emeghe nzọ.
N'elu ikpo okwu a (otu ihe a na-etinye na Lobby Miner), ọnụọgụ nke sekọnd na-egosi na ịgba nzọ ọ bụla, ebe ọnụ ọgụgụ buru ibu ma na-acha ọcha.
Dịka akara aka na-acha uhie uhie gosipụtara, m na-ahọrọkarị isi n'etiti etiti nọmba 1.
Iji tinye nhazi na koodu agba nke Ihe Na-akpalite, Naanị m ga-eme ka nhọrọ ahụ dị Oghere Ntughari Turbo, debe m na nọmba 1 mgbe ọ pụtara (n'otu ebe akara Koodu Agba gosipụtara na Ogwe Ama Pixel è ClWhite dị ka ọnụ ọgụgụ) e pịa oghere otu oge na kiiboodu.
Ọ bụrụ na ị gụọworị posts ma ọ bụ budata ► Roulette Turbo Clicker ma ọ bụ ► Roulette Bias Sniper, ị maraworị ihe m na-ekwu, ma ọ bụghị ikiri vidiyo na channelụ ► YouTube nke gosipụtara usoro dị mfe ịme.
N'ikpeazụ, na ihuenyo ikpeazụ anyị na-ahụ akụkụ nhazi nke 2 ụdị nke alerts nyere na panel Roomlọ Njikwa.
Nke mbụ na nke kachasị mfe bụ ịhọrọ ụda anyị chọrọ ịnụ mgbe mkpu nke uru tS bara ọrụ ma ọ bụrụ na anyị arụ ọrụ ahụ. Nchekwa onwe, ma ọ bụ mgbe ịkụ nzọ nke bot ahụ kwụsịrị.
Ọ bụrụ na ị hapụ ya ogbi O doro anya na ị gaghị anụ ihe ọ bụla ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị gbanyela mkpu ụda, ya mere gbanwee ya.
N'ịga n'ihu, anyị na-ahụ usoro nhazi ahụ ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnata ozi ịntanetị oge ọ bụla mkpu malitereNchekwa onwe).
Dịka ị ga - etinyeriri igbe igbe igbe gị, nke ga - esi na ya pụta ma dika onye nzipu ozi na dika onye nnata njikere ozi, ma ọ bụ i nwere ike iji dị iche iche igbe akwụkwọ ozi dị na ị rụọ ọrụ na gị onwe gị dị ka ziri ozi.
A na-echekwa akụkụ nhazi niile nke igbe ndị a na mpaghara na PC gị na faịlụ ahụ na mgbatị .ini nke ịchọtara n'ime folda mmemme ahụ, enweghị data anakọtara ma ọ bụ na-ebunye ya na mpụga.
Ozugbo abanyela ntọala niile, ịnwere ike ịnwale ma ọ bụrụ na nhazi ahụ ziri ezi site na ịpị bọtịnụ ahụ Ọrụ Ule, nke ga-ezipu ozi nnwale dị mkpirikpi site na onye zigara ya igbe ozi ebe aga. Ọ bụ ya.
Nbudata Nbudata	LSentinel2.zip - 4 MB